मलेसियामा किन अवैधानिक रुपमा काम गर्न बाध्य छन श्रमिक? इमिग्रेशनले यस्तो कदम चाल्दै ! - ramechhapkhabar.com
मलेसियामा किन अवैधानिक रुपमा काम गर्न बाध्य छन श्रमिक? इमिग्रेशनले यस्तो कदम चाल्दै !
मलेशिया इमिग्रेशनले कुवलालम्पुरको जलान सुलतान सुलेमान मा छापा मरेको छ। छापा सयौं अवैध आप्रवासीहरू पक्राउ परेका छन् । क्वालालम्पुर संघीय क्षेत्र अध्यागमन निर्देशक स्यामसुल बद्रिन मोहसिनले मध्यरात करिब १२ः१० बजे सुरु भएको उक्त अपरेसनमा करिब १ सय ५० व्यक्तिको चेकजाँच गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
“निरीक्षणको नतिजाको रूपमा, अवैध कागजातहरू, कुनै कार्य अनुमति र कुनै प्रत्यक्ष यात्रा कागजातहरू नभएका कुल ९५ अवैध आप्रवासीहरूलाई हिरासतमा लिइयो।
‘हिरासतमा रहेकामा ५२ पुरुष र ४३ महिला रहेका छन्, जसमा अधिकांश इन्डोनेसियाली, बंगलादेशी, म्यानमार, १९ देखि ६५ वर्ष उमेर समूहका नेपाली र पाकिस्तानी छन्,’ बुधबार अपरेशन स्थलमा भेट्दा उनले भने ।
श्यामसुल बद्रिनले भने कि त्यहाँ अवैध आप्रवासीहरू छतमा लुक्न खोजिरहेका थिए, र तिनीहरूमध्ये अधिकांशले छापा मार्ने टोलीबाट पक्राउ हुनबाट बच्न कोठाको ढोका खोल्न अस्वीकार गरे।
स्थितिले छापा मार्ने टोलीलाई फलामको ग्रिलमा आँप काट्न कटरको प्रयोग गरेर ढोका तोड्न बाध्य पारेको उनले बताए । थप टिप्पणी गर्दै उनले आफ्नो पार्टीले उक्त क्षेत्रमा अनुगमन गरेको र त्यहाँ धेरैजसो विदेशीले निर्माण मजदुर र सरसफाई मजदुरको रूपमा काम गरेको पाइएको बताए ।
साँघुरो र सानो कोठाका रूपमा काठ प्रयोग गरी परिमार्जन गरिएको परिसरको अवस्थाले आगलागी हुँदा सबै बासिन्दा जोखिममा पर्ने उनको भनाइ छ । “एउटा घरमा पाँचभन्दा बढी कोठा अवैध आप्रवासीहरूलाई भाडामा दिइएको छ र विद्युतीय तार र पाइप जडानहरू ठीकसँग जडान गरिएको छैन।
उनका अनुसार उनको पार्टीले संलग्न परिसरको मालिकको पहिचान गर्नेछ र अवैध आप्रवासीहरूलाई संरक्षण गर्ने तत्व भएमा छानबिन गर्नेछ।